Tag: ihe okike | Martech Zone
Tag: ihe okike
Ahịa Ọdịnaya bụ Ndozi nke Mmepụta na Okike
Ka anyị na-enyocha isiokwu na Martech Zone dee banyere, anyi na-eme nyocha banyere ewu ewu ha yana ọdịnaya nke ebiela ebi. Ọ bụrụ na anyị kwenyere na anyị nwere ike imelite isiokwu ahụ ma gbakwunye nkọwa ndị ọzọ bụ isi maka isiokwu ahụ - anyị na-ewere ọrụ nke ide ya n'onwe anyị. Ọ bụrụ na anyị kwenyere na anyị nwere ike ịkọwa isiokwu karịa site na onyonyo, eserese, nseta ihuenyo ma ọ bụ vidiyo - anyị ga-ewere ya. A
Ndị folks na Spundge dere ederede blọgụ, Nzọụkwụ 9 na ingmepụta Nnabata ọdịnaya, yana “no-hype, buzzword free” infographic nke m masịrị ya. Mepụta ọdịnaya dị mma bụ isi nkuku nke usoro ọdịnaya siri ike, na inyere gị aka ịma nka a bụ akụkụ nke ọrụ Spundge. Greatzọ dị ukwuu iji mepụta ọdịnaya bụ site na iji ihe ederede, ihe ọmụma na akụ ndị ọzọ gaa na ihe ndị mara mma ma na-adọrọ adọrọ. Nke a na-enye gị ohere ka ịdebe